Global Voices teny Malagasy · 7 Febroary 2019
07 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 07 Febroary 2019
Vao Mainka Mihemotra i Etiopia Amin'Izao Fisian'ny Fanamelohana An'I Eskinder Nega Izao
Etiopia 07 Febroary 2019
Ao amin'ity lahasoratry ny vahiny nasaina avy amin'ny Electronic Frontier Foundation ity, noraisina teo anatin'ny fampiharana ny ady amin'ny asa fampihorohoroana ataon'i Etiopia ny fanamelohana an'ilay blaogera Etiopiana Eskinder Nega .
Shina: Fanorisorenana ara-politika mihatra amin'ireo bilaogera mitaky ny famotsorana an'i Ilham Tohti
Shina 07 Febroary 2019
Nanjavona nandritra ny roa herinandro mahery ilay Profesora Uighur ao amin'ny Oniversite Minzu ao Shina sady mpanorina ny Uighurbiz, IIham Tohti.
Azia Afovoany sy Kaokazy 07 Febroary 2019
Iràna 07 Febroary 2019
Amerika Latina 07 Febroary 2019
"Raha toa hamoritra an'i Venezoelà ireo hery ao amin'ny faritra, alaivo sary ao an-tsaina hoe iza no hizaka ny vokany ? Ireo firenena mpifanolo-bodirindrina."
Ambaran'ny Lingua rosiana ny fiasany miaraka amin'ny “It Gets Better” Rosia
Mediam-bahoaka 07 Febroary 2019
Faly ny Global Voices amin'ny teny rosiana manambara ny fanombohan'ny fiasana miaraka amin'ny tetikasa It Gets Better Rosia.
Nosivanin'i Pakistan ireo sarin'ny governora – satria mampidi-doza amin'ny famendrehan'ny firenena
Pakistana 07 Febroary 2019
Namoaka torolàlana ho an'ireo mpamatsy tolotra aterineto ny Pakistan Telecommunication Authority (PTA), sampana mpanaramaso ny aterineto ao Pakistan mba hanakana ireo tranonkala enina noho izy ireo "mampidi-doza ho an'ny fahamendrehan'ny firenena".
Fantaro i Irma Alvarez Ccoscco, mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 4 ka hatramin'ny 10 Febroary 2019
Antsafa 07 Febroary 2019
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Irma Alvarez Ccoscco izay mitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas manomboka ny 4 ka hatramin'ny 10 Febroary 2019 iao amin'ny fanentanana ao amin'ny media sosialy vaovao mifantoka amin'ny fimaroana ara-pitenenanana an-tserasera.
Shina: Mpiserasera voasambotra noho ny tantara fanolanana tao Fujian
Omaly (16 Jolay) vao maraina, nandefa hafatra antserasera tao amin'ny twitter hoe: "nosamborin'ny polisin'i Mawei aho, SOS" ilay mpisera twitter amoiist. Ary ny hafatra faharoa dia: "ampio aho azafady, azoko ny telefonina nandritra ny torimason'ny polisy". Nanomboka teo dia tsy nisy intsony ny vaovao farany tao amin'ny twitter-ny.
Nahazo fanakianana ny politika Saodiana amin'ny famahanana bilaogy
Arabia Saodita 07 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Niatrika fanakianana sy fanaraha-maso efa hatry ny ela i Arabia Saodita noho ny tsy namelany ny haino aman-jery ao amin'ny firenena sy ny vahoaka haneho ny heviny tsy misy tahotra fanenjehana. Azo inoana fa hitombo ankehitriny ny fitsikerana satria...